Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.2.1 -ezughị ezu
N'agbanyeghị otú "big" gị "nnukwu data" ikekwe ọ anaghị nwere ozi na ị chọrọ.
Kasị nnukwu data isi mmalite ndị na-ezughị ezu, nke pụtara na ha enweghị ihe ọmụma na ị ga chọrọ ka gị nnyocha. Nke a bụ ihe ananu data na e kere maka nzube ndị ọzọ karịa nnyocha. Ọtụtụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-ama nwere ahụmahụ nke na-emeso ndị incompleteness, dị ka otu dị na nnyocha e mere nke ahụ emeghị ajụ ajụjụ ị chọrọ. O di nwute na, na nsogbu nke incompleteness na-aka enwe oké na nnukwu data. Na m ahụmahụ, nnukwu data nēche na-efu efu atọ ụdị ọmụma bara uru n'ihi na-elekọta mmadụ research: demographics, omume na ndị ọzọ na nyiwe, na data na-operationalize usoro iwu chepụtara.
All atọ ndị a iche-iche nke incompleteness na-e gosiri na a ọmụmụ site Gueorgi Kossinets na Duncan Watts (2006) banyere evolushọn nke mmadụ netwọk na a mahadum. Kossinets na Watts malitere na nke email ndekọ si mahadum, bụ nke nwere ozi ziri banyere onye zitere ozi ịntanetị onye ihe oge na-(na-eme nnyocha na-nwere ohere na ọdịnaya nke ozi ịntanetị). Ndị a email ndekọ dara gị ka ihe dị ịtụnanya dataset, ma, ha na--n'agbanyeghị na ha size na granularity-fundamentally na-ezughị ezu. Dị ka ihe atụ, ndị email ndekọ na-adịghị na-agụnye data banyere omume igwe mmadụ ji mara ụmụ akwụkwọ, dị ka nwoke na nwanyi na afọ. Ọzọkwa, email ndekọ na-adịghị na-agụnye ọmụma banyere nkwurịta okwu site ọzọ media, dị ka ekwentị oku, ozi ederede, ma ọ bụ ihu na ihu mkparịta ụka. N'ikpeazụ, email ndekọ na-adịghị na-agụnye ọmụma banyere mmekọrịta, ndị usoro iwu chepụtara na ọtụtụ ẹdude chepụtara. Mgbe e mesịrị ke ibuot, mgbe m na-ekwu banyere nnyocha azum, ị ga-ahụ otú Kossinets na Watts-edozi nsogbu ndị a.
Nke atọ di iche iche nke incompleteness, nsogbu nke na-ezughị ezu data ka operationalize usoro iwu chepụtara bụ hardest na-edozi, na m ahụmahụ, ọ bụ mgbe a na mberede anya site data ọkà mmụta sayensị. Olee ihe enyemaka, usoro iwu chepụtara bụ nkịtị echiche ndị na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-amụ, ma, n'ụzọ dị mwute, ndị a chepụtara nwere ike ọ bụghị mgbe niile a ga-unambiguously kọwaa na tụrụ. Dị ka ihe atụ, ka e were agbalị empirically nwalee o doro anya na mfe na-ekwu na ndị na-ọzọ nwere ọgụgụ isi irite ego. Iji nwalee a na-azọrọ na ị ga-mkpa ka tụọ "ọgụgụ isi." Ma, ihe ọgụgụ isi? Dị ka ihe atụ, Gardner (2011) rụrụ ụka na e nwere n'ezie asatọ ụdị dị iche iche nke ọgụgụ isi. Na, è nwere usoro na ike n'ụzọ ziri ezi tụọ bụla nke ndị a iche-iche nke ọgụgụ isi? N'agbanyeghị nnukwu ichekwa ọrụ ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ajụjụ ndị a ka na-adịghị anya azịza. N'ihi ya, ọbụna a dịtụ mfe na-azọrọ-ndị na-ọzọ nwere ọgụgụ isi irite ego-na-esi ike amata empirically n'ihi na ọ na-esi ike operationalize usoro iwu chepụtara na data. Ihe atụ ndị ọzọ usoro iwu chepụtara ndị dị mkpa ma nke siri ike operationalize agụnye "norms," ​​"na-elekọta mmadụ isi obodo," na "ochichi onye kwuo uche." Social ọkà mmụta sayensị na-akpọ egwuregwu n'etiti usoro iwu chepụtara na data mmepụta ya ndaba (Cronbach and Meehl 1955) . Na, dị ka a na ndepụta nke chepụtara na-atụ aro, rụọ ndaba bụ nsogbu nke na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị agbalịwo ruo nnọọ ogologo oge, ọbụna mgbe ha na-arụ ọrụ na data na e anakọtara maka nzube nke nnyocha. Mgbe arụ ọrụ na data anakọtara maka ebumnuche ọzọ karịa research, nsogbu nke mmepụta ya ndaba bụ ihe ịma aka karị (Lazer 2015) .
Mgbe ị na-agụ a research akwụkwọ, otu ngwa na bara uru n'ụzọ na-amata nsogbu ndị o mmepụta ya ndaba bụ na-isi na-azọrọ na akwụkwọ, bụ nke a na-egosipụta na okwu nke chepụtara, na re-igosipụta ya na okwu nke data eji. Dị ka ihe atụ, tụlee ihe abụọ hypothetical ọmụmụ na-ekwu na-egosi na ọgụgụ isi ndị mmadụ irite ego:
1: ndị na-Akara ọma na Raven Progressive Matrices Test-a ọma na-amụ ule nke analytic ọgụgụ isi (Carpenter, Just, and Shell 1990) -have elu kọrọ ego on ha tax alaghachi
Study 2: ndị on Twitter bụ ndị na-aba okwu ndị ọzọ yiri banyere okomoko ụdị
N'ọnọdụ abụọ ahụ, na-eme nnyocha nwere ike na-ekwu na ha egosila na ọzọ nwere ọgụgụ isi ndị mmadụ irite ego. Ma, ke akpa ọmụmụ ihe n'ọnụ chepụtara na-ọma operationalized site data, na nke abụọ ha na-adịghị. Ọzọkwa, dị ka ihe atụ a na-egosi, ihe data adịghị na-akpaghị aka idozi nsogbu dị na mmepụta ya ndaba. Ị kwesịrị ị na-enwe obi abụọ pụta Study 2 ma ọ abuana a nde tweet, a ijeri tweet, ma ọ bụ a-enweta puku ijeri tweet. N'ihi na-eme nnyocha bụghị maara na echiche nke mmepụta ya ndaba, Isiokwu 2.2 na-enye ihe atụ ụfọdụ nke ọmụmụ na operationalized usoro iwu chepụtara iji dijitalụ Chọpụta data.
Isiokwu 2.2: Ihe Nlereanya nke dijitalụ metụtara na-eji dị jikoro nke ihe nkịtị usoro iwu banye n'eluigwe. Social ọkà mmụta sayensị na-akpọ nke a egwuregwu mmepụta ya ndaba na ọ bụ a Nnukwu ihe ịma aka na-eji nnukwu data isi mmalite na-elekọta mmadụ research (Lazer 2015) .
usoro iwu mmepụta
email ndekọ si a mahadum (meta-data naanị) Social mmekọrịta Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
elekọta mmadụ media posts on Weibo Civic njikọ aka Zhang (2016)
email ndekọ si a siri ike (meta-data na zuru ederede) Cultural kwesịrị ekwesị na otu nzukọ Goldberg et al. (2015)
Ọ bụ ezie na nsogbu nke na-ezughị ezu data maka operationalizing usoro iwu chepụtara bụ ihe siri nnọọ ike na-edozi ahụ, e nwere ihe atọ na-ngwọta na-nsogbu nke na-ezughị ezu ozi igwe mmadụ na-ezughị ezu ozi na omume na ndị ọzọ na nyiwe. Nke mbụ bụ na n'ezie anakọta data gị mkpa; M agwa gị banyere ihe atụ nke na n'Isi nke 3, mgbe m kọọrọ gị banyere nyocha. O di nwute na, ụdị data collection bụghị mgbe niile kwere omume. Nke abụọ isi ngwọta bụ na-eme ihe data ọkà mmụta sayensị na-akpọ ọrụ na onye-àgwà inference na ihe na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-akpọ imputation. Na nke a obibia, na-eme nnyocha iji ozi ahụ nke na ha nwere on ụfọdụ ndị na-infer àgwà nke ndị ọzọ. Nke atọ na o kwere omume ngwọta-onye na-eji Kossinets na Watts-bụ ikpokọta multiple data isi mmalite. Usoro a na-akpọ mgbe ụfọdụ merging ma ọ bụ ndekọ linkage. Ọkacha mmasị m atụ nke a na-chọrọ ke ata akpa paragraf nke ata akpa akwụkwọ mgbe e dere na ndekọ linkage (Dunn 1946) :
"Onye ọ bụla nọ n'ụwa na-emepụta a Book of Life. Nke a Book amalite na nwa na-agwụ na ọnwụ. N'ime ya, e mejupụtara ihe ndekọ nke ụkpụrụ ihe ná ndụ. Record linkage bụ aha e nyere usoro nke gbakọta peeji nke akwụkwọ a n'ime a olu. "
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na e dere na 1946, na n'oge ahụ, ndị mmadụ nọ na-eche echiche na Book of Life nwere ike ịgụnye isi ndụ ihe dị ka ọmụmụ, alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm, na ọnwụ. Otú ọ dị, ugbu a na ọtụtụ ozi banyere ndị ẹwet, the Book of Life nwere ike ịbụ incredibly zuru ezu Eserese, ma ọ bụrụ na ndị dị iche iche na peeji nke (ie, anyị digital metụtara), nwere ike-agbụ ọnụ. Nke a Book of Life nwere ike ịbụ oké akụ maka nnyocha. Ma, n'Akwụkwọ nke Ndụ nwekwara ike a na-akpọ a nchekwa data nke mbibi (Ohm 2010) , nke nwere ike a ga-eji ụdị nile nke unethical nzube, dị ka a kọwara ihe n'okpuru mgbe m ikwu banyere mmetụta ọsọ ọsọ ọdịdị nke ozi anakọtara site na nnukwu data isi mmalite n'okpuru na n'Isi nke 6 (Ethics).